Sida loo sameeyo rakibo nadiif ah oo ah macOS High Sierra 10.13 | Waxaan ka socdaa mac
Sida loo sameeyo rakibid cusub oo ah macOS High Sierra 10.13
Jordi Gimenez | | macro High Sierra, Tababarada
Ma rabtaa inaad rakibto macOS High Sierra meel xoq ah? Waxaan wajaheynaa nidaamka cusub ee Apple ee loogu talagalay Mac-yada oo markaan ku soo dejisanno kumbuyuutarkeena, laba nooc oo qalab ah ayaa la fulin karaa: midka aan ugu yeerno Cusbooneysiinta iyo midka aan ugu yeerno nadiif ama ka xoqid.
Labada xaaladoodba, isticmaaluhu wuxuu doortaa ikhtiyaarka ugufiican oo sida iska cad wax waliba waxay ku xirnaan doonaan waxa aan maalin walba la qabanno kooxdeena, haddii aan uruurino codsiyo badan ama dukumiintiyo iyo kuwa kale. Xog kale oo muhiim ah labada xaaladoodba, ha cusboonaysiiso ama wax ka soo rakibo, waa qasab in la sameeyo nuqul nuqul ah oo ah Mac-da ku jirta Waqtiga Mashiinka ama wixii la mid ah, markaa waan iska ilaalin doonnaa madax-xanuun haddii wax qaldamaan.
Runtu waxay tahay in noocan ah cusbooneysiinta muhiimka ah lagu talin karo in laga sameeyo xoqan inkasta oo aysan ahayn shuruud lagama maarmaan ah, taasi waa, Haddii aadan rabin inaad ku rakibto macOS Sierra xoqitaanka, si fudud uga soo dejiso Mac App Store oo guji rakib. Waxaan kugula talineynaa inaad ka soo dejiso xoqida si aad u tirtirto codsiyada kale ee aan la daboolin, khaladaadka ama wax kasta oo wax u dhimi kara khibrada nooca cusub ee nidaamka, laakiin horay u soco taasi oo aan qasab ahayn, waan cusbooneysiin karnaa oo aan tagi karnaa.
1 Rakibaadda xoqidda
2 Cusboonaysiinta qalabka
Xaaladdan oo kale, waxa aan qaban doonno sannadkan waa inaan dhinac dhigno qalab naga caawinaya inaan ka sameysano disk boot ka USB ama disk dibadda ugu yaraan ah 8 GB oo keyd ah iyo waxaan ka sameyn doonnaa Terminal. Waxa ugu horeeya ee aan sameyneyno ayaa ah - ka soo dejiso macOS High Sierra App Store, Markuu soo dejintu dhammaato ma rakibi doonno, waxaan xiri doonnaa rakibaadda adigoo riixaya cmd + Q.
Marka soo degsigu bilaabmo waxaan ku sii wadi karnaa hawsha rakibidda oo laga soo bilaabayaa waana mid aad u fudud. Qaabee oo magaca ugu beddel USB markaa waan fureynaa terminal oo waanu koobiyeynay koodhka in aan halkan kaga tagno hoosta, waxay na weydiin doontaa lambarkeena sirta ah, waan galinay waana sii wadeynaa.
sudo / Codsiyada / Ku rakib \_ macOS \_ Sare \_ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume / Volume / Cinwaan la'aan-codsi / Codsiyo / Ku rakib macOS \_ Sare \_ Sierra.app
Diyaar ma aha, hadda waxaan abuurnay rakibo waa inaan sugnaa oo kaliya macOS-ka cusub ee loo yaqaan 'macOS High Sierra' si loogu koobiyo USB-ga. Formatting waxaa loo samayn doonaa si otomaatig ah waana inaan qaabeynaa kaliya diskigayaga gudaha meesha nidaamka qadiimiga ah uu yahay, taas oo ah, macOS Sierra. Kadib si fudud oo leh USB ama disk dibadda ku xiran Mac, waxa inala gudboon waa kabaha ku dheji adoo riixaya Alt oo rakib nidaamka cusub ee macOS High Sierra.
Haddii aan rabno waan ka boodi karnaa rakibidda xoqida, si fudud u cusbooneysiinta Mac-da ee Mac App Store. Tani waa waxa ay sameyso waa rakibida nidaamka dusha sare ee waxa aan heysano inkasta oo ay run tahay in Apple aysan naga hor istaageynin inaan sameyno cusbooneysiinta noocan ah, haddii aan faylal badan, codsiyo iyo kuwa kaleba ku hayno Mac, waa laga yaabaa in waqti ka dib waxkale gaabso Waxaan sidoo kale ognahay dad aan waligood samayn wax nadiif ah ama xoqitaan ah Mac-kooda oo aan wax dhibaato ah qabin.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, cusbooneysiinta Mac-da waa mid fudud waana inaan si fudud u raacnaa talaabooyinka ay tilmaameen rakibayaasha macOS High Sierra. Waxaan arki karnaa inay aad ufudud yihiin asal ahaanna waa in lasiiyo: xiga - xiga - xiga.
Waxaa muhiim ah in la sheego in keydka kiisaskaan sidoo kale ay muhiim tahay, waxaa laga yaabaa inaan la kulanno koronto aan la fileynin ama dib u dhac kale oo burburin kara galabta iyo gaar ahaan dukumiintiyada aan ku hayno kumbuyuutarka, markaa ka hor intaadan riixin badhanka cusbooneysiinta Kadib soo dejinta, waa muhiim ah in la sameeyo a kaydinta adoo adeegsanaya Time Machine ama qalab kasta oo aan dooneyno. Haddii aad su'aalo qabto waxaad isticmaali kartaa qaybta faallooyinka.
Ugu dambeyntiina, caddee in rakibidda laga soo bilaabo xoqdu ay xoogaa ka sii dhib badan tahay Kuwa adeegsadayaasha ah ee aan aqoonta u lahayn Mac-yada ama kuwa hadda soo iibsaday qalabka, marka runti hadaad dhawaan haysato Mac waqti umaadan helin inaad "ku xoqdo cuqdad" markaa waxaa ugu wanaagsan inaad toos u cusbooneysiiso wax dhibaato ahna kalama kulmi doontid iyo qalabkaaga ayaa si fiican u shaqeyn doona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo sameeyo rakibid cusub oo ah macOS High Sierra 10.13
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa Imac laga soo bilaabo 2013 iyo kadib markii aan qaabeeyay kombuyuutarka oo aan isku dayay inaan dib u dhigo OSx, nidaamku wuxuu ii sheegayaa in Sierra aan laga heli karin App Store ...
Oo hadda taasi?…
ma haysaa USB-ga la kici karo? ma leedahay wifi firfircoon?
Sikastaba xaalku ha noqdee, hadaad raacday talaabooyinka, waa inay adiga kuu shaqaysaa, haddii kale waxaad mar walba dib uga dhisi kartaa kaydinta Mashiinka Waqtiga.
Haye, haddii aan Wi-Fi firfircoon yahay laakiin aanan haysan USB la abuuray ama nuqul ku jira Time Machine… oo kombuyuutarka horay loo qaabeeyey….
Eeg, marwalba waan ka digeynaa wixii ku saabsan nuujinta huh!
Isku day inaad damiso Mac-da iyo goorta ay bilaabanto saxaafadda Xulashada-Command-R, ka dibna u cusbooneysii nooca ugu dambeeya ee macOS ee la jaan qaadi kara kombuyuutarkaaga
adigu noo sheeg
Xaqiiqdu waxay tahay inaan haysto dhamaan feylashayda muhiimka ah oo aamin ah laakiin waxaan doonayay inaan dib udajiyo OS-ka xoq ... waxaan raacay tillaabooyinka ka bilaabaya Command + R laakiin markii aan raadinayay App Store OS-ka lama helin ... hadaan imid inaan ogaado inaanay taasi dhici karin ayay igu dhacdaa inaan runta qaabeeyo format.
Wanaagsanaa su'aal, waxaan haystaa macbook pro 2012 waxaanan doonayay inaan wax ka soo rakibo xoqida, waxaan haystaa laba darawal oo adag, sdd aan ku haysto nidaamka iyo codsiyada lagu rakibay iyo HDD kale oo aan ka helo sawirada, muusigga iyo kuwa kale , samee rakibidda ka soo xoqida, labadaba saxannada lama nadiifiyo? Mise ssd uunbaa la qaabeyn lahaa?
Ku jawaab Borja
Gacaliye, kaliya qaab u samee midka kale ee SSD looma baahna
Ku jawaab Marxter
Waad salaaman tahay Borja, waa inaad qaabeeysaa kaliya diskiga aad ku haysato OS, midka kale, ha taaban.
Mar labaad waad salaaman tihiin, waxaan isku dayayaa inaan sameeyo usb macaan kale oo leh sierra markii aan khadka ku dhajisto terminalka wuxuu ii sheegayaa….
Waa inaad sheegtaa wadada mugga.
Waxaan isku dayay dhowr jeer ...
Amarkani waxaa loogu talagalay abuurista rakibaadda 'macOS High Sierra', ee maahan macOS Sierra
Xaqiiqdii amarradaadu waa khaldan yihiin, weydii dariiqa mugga
Sax ayaa ah
"Sudo / Codsiyada / Ku rakib macOS \_ Sare \_ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume / Volume / Cinwaan la'aan-codsi / Codsiyo / Ku rakib macOS sare" Sierra.app "
Waxay umuuqataa cilad ku timid qoraalka markii gacanta lagu qorayo koodhka miyaanay ahayn?
Amarkuna waa isku mid labada xaaladood
Xaqiiqdii waan soo guuriyey oo aan dhajiyay, midda aan galiyay mar hore ayaa la saxay, mar hore ayaan haystaa rakibaadda USB-ga ks Tks!
Winston duran dijo
Waxaan hayaa iMac Late 2009, waxaan ku rakibay macOS Sierra oo markaan isku dayayo inaan cusbooneysiiyo macOS High Sierra, qalad ayaan helayaa ¨ Waxaa jiray qalad lagu xaqiijinayo qalabka qalabka ¨
dhibaatadan xal malahan ???
Jawaab Winston Duran
Winston hi, samee hubinta gargaarka degdegga ah OS X oo hubi cusboonaysiinta sare ee sare ama mar kale soo degso. salaan
Waad ku mahadsan tahay Kharashka,
Waan qabtay oo xitaa waan duubay USB-ga si aan uga soo rakibo 0, laakiin rakibistu waligeed ma dhammaato oo dib ayey iigu celisaa si aan nidaamka u soo celiyo.
Waxay noqon kartaa in SSD (SanDisk) uusan la jaan qaadi karin waana sababtaas sababta ay u siineyso qaladkaas ama ma ii ogolaanayo inaan rakibo?
Astaamaha ka horreeya amarka «mugga» ayaa khaldan; Waxay umuuqataa in websaydhada oo dhan ay ka soo guuriyeen hal ilo qaldan. Si aad u saxdo, ka saar jaantuska hore loogu heli jiray qoraalka kuna beddel laba dhejis oo cusub. Waxaad isticmaali kartaa waxyaabaha soo socda:
sudo / Codsiyada / Ku rakib macOS High Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume / Volume / Cinwaan la'aan-codsi / Codsiyada / Ku rakib macOS High Sierra.app
Markay tahay tirtirka diskiga weyn (SSD) ee Disk Utilities, ma inaad dhigtaa AFPS ama macOS Plus (oo leh diiwaan)?
Ku jawaab Manu
Hadday tahay SSD waxaad dhigi kartaa AFPS ama macOS Plus, hadba waxaad rabto
Maareynta faylka ee SSD ayaa leh Apple ayaa ka dhaqso badan uguna fiican AFPS
Manu ka dib markaad aqriso dhowr kulan waxay kugula talineysaa inaad dhigto macOS Plus (diiwaangelin) marka rakibida la dhammeeyo haddii aad hubiso darawalkaaga adag waxay u muuqataa AFPS
Xalay waxaan ka soo saaray USB-ka adoo adeegsanaya terminal, tabarucaada waa la qadarinayaa. Si kastaba ha noqotee, waxaan u maleynayaa inaan sugi doono dhowr maalmood, maxaa yeelay waxaa jira barnaamijyo aan ku shaqeyn cusbooneysiintan cusub.
Jawaab Francisco Franciscozuela Rojas
Waxaan arkay in dadka isticmaala qaarkood ay leeyihiin dhibaato lamid ah tan aan hada soo bandhigayo, waxaan isku dayay inaan cusbooneysiiyo, laakiin waxay i siisaa qalad xaqiijinta Firnware. Waxaan duubay USB si aan u sameeyo rakibaadda 0, laakiin weligeed ma dhammayn rakibiste waxayna ii dirtay shaashadda dib u soo celinta.
CIISE WALBA dijo
Xaqiiqdii isla waxbaa igu dhacaya aniga oo ah 2013 macpro leh 1tb owc ssd, waxaan isku dayay inaan cusbooneysiiyo oo keli ah iyo ka xoqida ma aanan guuleysan ama waxaa la iiga tagay shaashad galka iyo su'aal indho indheyn ah.
Jawaab JESÚS ALONSO
Waad salaaman tahay, barnaamijkeyga macbook-ga ee laga soo bilaabo 2012, waxaa lagu rakibay siraariyo sarre oo xoq ah qeyb ka mid ah, waxaa soo baxday in dhowr fure aysan shaqeynin, marka laga bilaabo Sierra Leone wax dhibaato ah kama jiraan kumbuyuutarka, wax fikrado ah? aad ayaad u mahadsantahay
Wanaagsan Waxaan rabaa in aan soo dejiyo High Sierra si aan u isticmaalo ssd-ka banaanka ah sida diskka ugu weyn ee iMac-kayga. Xaqiiqdu waxay tahay inaan horeyba u rakibay, mana ii oggolaan doonto inaan mar kale soo dejiyo. Sideen ku sameyn karaa si aan howsha oo dhan mar dambe u bilaabo?
Ku jawaab gardel9
Markaad rakibineyso Mac OS sare Sierra, waxay i weydiin doontaa koonto iCloud ah, maxaa yeelay ma haysto, maxaa yeelay markii la rakibayo xoqida waxay la mid tahay sidii aan u iibsaday sidii cusub.
Ku jawaab gilberto
Waad salaaman tihiin. Sideen u qaabeynayay macbook Pro laakiin waqtiga la rakibayo OS-ka ayaa dhexda jooga mana sii rakibayo. Waxaan uga tagay maalmo si aan u arko inay shaqaysay laakiin maya. Sidoo kale u beddelo darawalka adag mid kale oo aan haystay laakiin taasi iima oggolaaneyso aniga ama inaan qaabeeyo Mac OS (oo leh diiwaan).
Waan ka xumahay jahwareerka ... miyaad ogtahay haddii ay jirto dhibaato ku rakibida laga soo bilaabo xoqida qayb horeba u ahayd APFS? Mahadsanid
on a iMAC dabayaaqadii 2013, Waxaan u abuuri USB iyo wax walba ok. Waxaan ku bilaabayaa ALT, waxaan doortaa USB ... daqiiqado yar kadib waxaan helayaa shaashad madow oo isku badasha jiirka iyo kiiboodhka (mana aqoonsana jiirka)
Isugeyn, in aanan awoodin ... Kadib waxaan dib u bilaabayaa COmand + Ikhtiyaar + R ... ka dibna haddii ay shaqada bilowdo. Waxay i weydiineysaa waxa aan rabo inaan sameeyo, waxaana qaabeeyaa SSD si aan uga soo raro xoqida. Arrintu waxay tahay in SSD horeyba ugu haysatay sidii APFS ... Ku rakib, laakiin waxaan fiiriyaa qormada oo waxaa jira khaladaad badan, gaar ahaan la xiriira AFPS ... Wadarta, ka dib 15 daqiiqo ka dib waxay leedahay qalad, oo aanu wax rakibayn.
Wax la mid ah ayaan haddana sameeyaa, natiijaduna waa isku mid; mana awoodi karo inaan dib-u-habeyn ku sameeyo SSD-ka MacO-yada diiwaangelinta won't ma oggolaan doonto.
Ugu dambeyntiina waa inaan ka soo kabto internetka, ka dibna TimeMachine ... iyo dabcan, wax aan ku rakibo xoq
Hello Miguel; Waxa ugu horeeya ee aad tiriso aniga ayey igu dhacdaa aniga sidoo kale (aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kaligey ahay) isla markaana leh isla muuqaalka iMac (dabayaaqadii 2013) iyo waliba SSD drive adag (kiiskeyga waxaan ku bedelay Apple SAT oo waxay ii dhigeen mid aan rasmi ahayn) (waxa aan aqoonsanayn jiirka kadib markay doorteen qaybta rakibidda USB).
Xitaa waxaan lahadlay wada hadal Apple SAT waxaanan kudhameeyay inaan uqaato SAT jireed (sedex maalmood ayaa iiga haray ilaa Apple Careka uu dhacay); Labada xaaladood midkoodna ima xallin aniga ama uma ogaan inay qalad tahay, markaa gurigayga ayaan ku haystaa, wax kasta oo si fiican u shaqeynaya marka laga reebo faahfaahintaas yar.
Markaad ku qaabeyneyso 'Control-Alt-R' dhib dambe uma aanan qabin, nasiib wanaag, had iyo jeer qaab APFS ah.
Si kastaba ha noqotee, on my macbook 2016 wax sidan oo kale ah uma dhacaan wax walbana si caadi ah ayey u shaqeeyaan; iMac sidoo kale waxay sameysay dhibaato la'aan kahor intaan loo cusbooneysiinin High Sierra iyo APFS.
Salaan iyo nasiib wacan.
Waad salaaman tahay magacaygu waa Antonio. Fadlan fiiri haddii aad i caawin karto, horay ayaan kuugu mahadcelinayaa.
Waxaan hayaa mac mini Yosemite oo leh nidaamka qalliinka ee Sierra, waxaan u aaday inaan cusbooneysiiyo oo aan arko inay qaadatay waqti dheer in la damiyo, hadda ma bilaabmayo.
Hayso kiiboodh aan tufaax ahayn waa aamin caadi ah.
Waxaan hayaa keyd kumbuyuutar kumbuyuutar ah oo dibadda ah, laakiin kama kici karo diskiga.
M. Jose dijo
Salaan, magacaygu waa M. José. Kaliya waxaan iibsaday MacBook Pro mana garanayo haddii aan rakibo barnaamijyo horay loo adeegsaday sida farshaxan daabacan iyo 'corel' (waxaan u maleynayaa inuu adeegsanayo nidaam kale oo hawlgal) Haddii ay suurtagal tahay waxaan jeclaan lahaa inaad ii sheegto sida loo sameeyo.
Aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada
Jawaab M. José
Dhammaan noocyada 'macOS' waxay leeyihiin "nuglaanta" laga soo sheegayo High Sierra
Bixinta gaadiidka dadweynaha ee Singapore oo leh Apple Pay waxay run noqon kartaa 2018